Faminaniana ara-Baiboly - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Iza moa izahay? > Mino ny WKG > Faminaniana ara-baiboly
Ny faminaniana dia manambara ny sitrapon’Andriamanitra sy ny drafitra ho an’ny olombelona. Ao amin’ny faminanian’ny Baiboly, Andriamanitra dia manambara fa voavela ny fahotan’ny olombelona amin’ny alalan’ny fibebahana sy ny finoana ny asa fanavotana nataon’i Jesosy Kristy. Ny faminaniana dia manambara an'Andriamanitra ho Mpamorona sy Mpitsara ny zava-drehetra ary manome toky ny olombelona ny fitiavany, ny fahasoavany ary ny tsy fivadihany ary mandrisika ny mino hanana fiainana araka an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. (Isaia 46,9-11; Lioka 24,44-48; Daniela 4,17; Joda 14-15; 2. Petrus 3,14)
Inoanay ny faminaniana ao amin'ny Baiboly
Betsaka ny kristiana no mila fomba fijery faminaniana toy ny aseho etsy ambony, hahitana faminaniana amin'ny fomba fijery tsara. Izany dia satria maro ny kristiana no manafaka ny faminaniana ary milaza fa tsy afaka manohana izy ireo. Ho an'ny sasany, ny faminaniana no foto-pinoana lehibe indrindra. Mitoetra ao amin'ny toerana lehibe indrindra ao amin'ny fianaranao Baiboly, ary izany no lohahevitra tianao indrindra. Mivarotra tsara ny sombin-tantara Hara-magedona. Betsaka ny kristianina tokony hitandrina izay lazain'ny zavatra inoantsika momba ny faminaniana ara-Baiboly.
Ny fanambarantsika dia manana fehezanteny telo: ny voalohany dia milaza fa ny faminaniana dia ampahany amin'ny fanambarana avy amin'Andriamanitra ho antsika, ary misy zavatra milaza amintsika hoe iza izy, iza izy, inona ary tadiaviny ary ataony.
Ny fehezanteny faharoa dia milaza fa ny faminaniana ao amin'ny Baiboly dia milaza ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy midika akory izany fa ny faminaniana rehetra dia mifandraika amin'ny famelan-keloka sy ny finoana an'i Kristy. Mbola milaza isika fa ny faminaniana no hany toerana izay anambaran'Andriamanitra ireo zavatra ireo ny amin'ny famonjena. Afaka milaza isika fa ny faminaniana sasany momba ny famonjena amin'ny alalàn'i Kristy na ilay faminaniana dia iray amin'ireo fomba maro nanambaran'Andriamanitra ny famelan-keloka amin'ny alalan'i Kristy.
Satria mifantoka amin'i Jesoa Kristy ny drafitr'Andriamanitra ary ny faminaniana dia ampahany amin'ny fanambaran'Andriamanitra ny sitrapony, tsy azo ihodivirana fa mifandray mivantana na tsy mivantana amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny alalàn'i Jesosy Kristy. Saingy tsy miezaka ny hamantatra ny faminaniana rehetra izahay - manome fampidirana antsika.
Ao amin'ny fanambarantsika dia te-hanome fomba fijery mahasalama momba ny antony misy ny faminaniana. Ny fanambarantsika dia mijoro amin'ny fanoherana ny filazana fa ny ankamaroan'ny faminaniana dia miompana amin'ny ho avy, na mifantoka amin'ny olona sasany. Ny zava-dehibe indrindra momba ny faminaniana dia tsy mikasika ny olona ary tsy ny ho avy, fa momba ny fibebahana, finoana, famonjena ary fiainana eto sy anio.
Raha nanao fanadihadiana tamin'ny ankamaroan'ny antokom-pivavahana izahay, dia misalasala aho raha betsaka ny olona hilaza fa ny famelan-keloka sy ny finoana no faminaniana. Mihevitra izy ireo fa mifantoka amin'ny zavatra hafa. Fa ny faminaniana kosa dia momba ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary koa ny zavatra maro hafa. Rehefa mijery ny faminaniana ara-baiboly ny olona an-tapitrisany mba hamaritana ny fiafaran'izao tontolo izao, raha misy faminaniana an-tapitrisany miaraka amin'ny fisehoan-javatra izay ho avy, dia manampy ny mampahatsiahy ny olona fa ny tanjona iray amin'ny faminaniana dia ny manambara. fa ny heloky ny olombelona dia azo avela amin'ny alalan'ny asa famonjena nataon'i Jesoa Kristy.
Te-hilaza zavatra vitsivitsy kokoa momba ny filazantsika izahay. Voalohany dia milaza fa azo avela ny heloky ny olombelona. Tsy milaza ny fahotan'olombelona izany. Miresaka ny toetry ny fiainana maha-olombelona isika fa tsy ny valin'ny tsirairay avy amin'ny fahotantsika. Marina fa afaka mamela heloka ny ota tsirairay avy amin'ny finoana an'i Kristy, fa ny tena zava-dehibe kokoa dia ny famelana ny toetra ratsy, ny fototry ny olana. Tsy hanana fotoana na fahendrena mihitsy isika hibebaka amin'ny ota rehetra. Ny famelan-keloka dia tsy miankina amin'ny fahafahantsika misoratra azy rehetra. Fa kosa, mamela an'i Kristy ho antsika rehetra, ary ny toetra maha-mpanota antsika no mifototra amin'izany rehetra izany.
Manaraka dia hitantsika fa voavela ny fahotantsika amin'ny alalan'ny finoana sy ny fibebahana. Te-hanome antoka tsara isika fa navela ny helontsika ary voavela heloka izany, noho ny fibebahana sy ny finoana ny asan'i Kristy. Izany dia iray amin'ny faritry ny faminaniana. Ny finoana sy ny fibebahana dia lafiny roa amin'ny vola madinika mitovy. Mitranga tsy miandalana ireo fotoana ireo, na dia lojika fotsiny aza ny finoana. Raha manova ny fitondrantsika fotsiny isika fa tsy mino dia tsy karazana fibebahana no mitondra famonjena. Ny fibebahana miaraka amin'ny finoana ihany no mahomby amin'ny famonjena. Ny finoana dia tsy maintsy ho tonga aloha.
Matetika isika milaza fa mila mino an’i Kristy. Marina izany, nefa io fehezanteny io dia milaza fa mila mino ny asany famonjena isika. Tsy hoe matoky azy ihany isika - matoky ny nataony koa isika izay mamela antsika hahazo famelan-keloka. Tsy izy irery ihany fa olona mamela ny fahotantsika - zavatra ihany koa na zavatra nataony.
Amin'ity fanambarana ity dia tsy faritanay hoe inona ny asany famonjena. Ny fanambaranay momba an'i Jesoa Kristy dia milaza fa "maty noho ny fahotantsika" ary "mpanelanelana amin'Andriamanitra sy ny olona" Izy. Asa famonjena izay tokony hinoantsika ary ahazoantsika famelan-keloka.
Raha ny teôlôjika, ny olona dia afaka mahazo famelan-keloka tsotra fotsiny amin'ny finoana an'i Kristy, tsy manana finoana marina momba ny fomba ahafahan'i Kristy manatanteraka izany ho antsika. Tsy misy teoria manokana momba ny sorompanavotan'i Kristy izay takiana. Tsy misy finoana manokana momba ny andraikiny amin'ny maha mpanelanelana azy izay ilaina amin'ny famonjena. Na izany aza, mazava amin'ny Testamenta Vaovao fa ny famonjena antsika dia vita tamin'ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ary Izy no mpisoronabe niditra an-tsehatra ho antsika. Rehefa mino fa ny asan'i Kristy dia mahomby amin'ny famonjena antsika dia iharan'ny famelan-keloka isika. Izahay dia manaiky azy ary ivavahantsika ho Mpamonjy sy Tompo. Isika manaiky fa manaiky antsika amin'ny fitiavany sy ny fahasoavany izy ary manaiky ny famonjeny mahafinaritra isika.
Milaza ny fanambaranay fa ny faminaniana dia miresaka momba ny tsipiriany mekanika momba ny famonjena. Mahita porofon’izany isika ao amin’ny soratra masina voatonona any amin’ny faran’ny fijoroana ho vavolombelona ananantsika — Lioka 24. Teo i Jesosy efa nitsangana tamin’ny maty dia nanazava zavatra vitsivitsy tamin’ny mpianatra roa teny an-dalana ho any Emaosy. Manonona ny andininy faha-44 ka hatramin’ny faha-48 isika, nefa azo ampidirina koa ny andininy faha-25 ka hatramin’ny faha-27: «Ary hoy Izy taminy: Ry adala, kamo loatra ka tsy mino izay rehetra nolazain’ny mpaminany! Tsy maintsy niaritra izany va Kristy ka niditra tao amin’ny voninahiny? Ary nanomboka tamin’i Mosesy sy ny mpaminany rehetra Izy ka nanazava taminy izay voalaza ao amin’ny Soratra Masina rehetra momba Azy » (Lioka 2.4,25- iray).
Tsy nilaza i Jesosy fa ny Soratra Masina ihany no niresaka azy na ny faminaniana rehetra momba azy. Tsy nanam-potoana handia ny Testamenta Taloha manontolo izy. Ny faminaniana sasany dia momba azy ary ny sasany dia tsy mivantana fotsiny momba azy. Nohazavain'i Jesosy ny faminaniana izay tena miresaka aminy mivantana. Nino ny mpianatra ny ampahany tamin'ny zavatra nosoratan'ny mpaminany, saingy miadana ny nino ny zavatra rehetra. Tsy hitan'izy ireo ny ampahany amin'ny tantara ary dia nofenoin'i Jesosy ny banga ary nohazavainy azy ireo. Na dia ny sasany amin'ireo faminaniana momba an'i Edoma, Moab, Asyria, na Egypt ary ny sasany dia momba an'i Isiraely, ny sasany kosa dia momba ny fijaliana sy ny fahafatesan'ny Mesia ary ny nitsanganany tamin'ny maty ho voninahitra. Nohazavain'i Jesosy tamin'izy ireo izany.
Mariho koa fa nanomboka tamin'ny bokin'i Mosesy i Jesosy. Ahitana faminaniana mesianianina ny ankamaroany, fa ny ankamaroan'ny Pentateuch dia momba an'i Jesoa Kristy amin'ny fomba hafa - amin'ny resaka typolo, sorona ary fombafomba fisoronana izay maminany ny asan'ny Mesia. Nanazava ireo hevitra ireo koa i Jesosy.
Ny andininy faha-44 ka hatramin'ny faha-48 dia milaza amintsika bebe kokoa: «Fa hoy kosa izy taminy: Izao no teniko izay nolazaiko taminareo fony mbola teo aminareo aho: tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra voasoratra milaza ahy ny amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ao amin'ny salamo »(and. 44). Ary indray, tsy nilaza izy fa ny mombamomba azy rehetra dia momba azy. Ny zavatra nolazainy dia ny ampahany izay manodidina azy no tsy maintsy tanteraka. Mieritreritra aho fa afaka nanampy isika fa tsy ny rehetra no tokony ho tanteraka amin'ny fiaviany voalohany. Ny faminaniana sasany dia toa manondro ny ho avy, amin'ny fiaviany fanindroany, saingy araka ny nambarany dia tsy maintsy tanteraka izy ireo. Tsy ny faminaniana ihany no nanondro azy - ny lalàna dia nanondro azy koa, ary ny asa izay hataony ho famonjena antsika.
Andininy 45-48: "Dia nosokafany ny sainy, ka azon'izy ireo ny hevitry ny Soratra Masina, dia hoy izy taminy: Voasoratra fa hijaly Kristy ary hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo; ary amin'ny anarany no mitory fibebahana ho famelan-keloka amin'ny olona rehetra. Manomboka any Jerosalema dia aoka ho vavolombelona amin'izany. » Eto dia manazava ny faminaniana sasany momba azy i Jesosy. Tsy ny faminaniana ihany no nanondro ny fijaliana, ny fahafatesany ary ny fitsanganan'ny Mesia - ny faminaniana koa dia nanondro ny hafatry ny fibebahana sy ny famelan-keloka, hafatra iray izay hambara amin'ny olon-drehetra.
Ny faminaniana dia mikasika zavatra maro isan-karazany, fa ny zava-dehibe indrindra ary ny tena zava-dehibe indrindra dia ny fahafahantsika mahazo famelan-keloka amin'ny alalan'ny fahafatesan'ny Mesia. Tahaka ny nanantitranteran'i Jesôsy ny tanjon'ilay faminaniana teny an-dalana ho any Emmaus, dia manamafy izany tanjon'ny faminaniana izany ao amin'ny fanambarana nataonay izahay. Raha liana amin'ny faminaniana isika dia tokony ho azontsika antoka fa tsy hanadino izany ampahany amin'ilay andalana izany. Raha tsy azontsika ity ampahany amin'ny hafatra ity dia tsy misy zavatra hafa hanampy antsika.
Mahaliana izany, Apokalypsy 19,10 amin’izao manaraka izao ao an-tsaina: “Fa ny filazana an’i Jesosy no fanahin’ny faminaniana”. Ny hafatra momba an’i Jesosy dia ny fanahin’ny faminaniana. Momba izany rehetra izany. I Jesoa Kristy no fototry ny faminaniana.
Tanjona telo hafa
Ny fehezanteny fahatelo ananantsika dia manome antsipiriany maromaro momba ny faminaniana. Hoy izy: "Ny faminaniana dia manambara an'Andriamanitra ho Mpahary sy Mpitsara Tsitoha mihoatra noho ny rehetra ary manome toky ny olombelona ny fitiavany, ny fahasoavany ary ny fahatokiany ary manosika ny mpino hiaina hanana fiainana tia an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy." Ireto misy tanjon'ny faminaniana telo hafa. Voalohany dia milaza amintsika fa Andriamanitra no Mpitsara ny zava-drehetra. Faharoa, milaza amintsika izy fa be fitiavana sy mamindra fo ary tsy mivadika Andriamanitra. Ary fahatelo, io faminaniana io dia manosika antsika hiaina araka ny tokony ho izy. Andao hodinihintsika akaiky ireo tanjona telo ireo.
Milaza amintsika ny faminanian’ny Baiboly fa manana fahefana sy fahefana amin’ny zava-drehetra Andriamanitra. Manonona ny Isaia 4 isika6,9-11, andalan-teny iray manohana io hevitra io. “Eritrereto ny teo aloha ho toy ny hatramin’ny fahagola: Izaho no Andriamanitra, fa tsy misy hafa, Andriamanitra tsy misy tahaka izany. Hatrany am-piandohana aho no nanambara izay ho avy aorian’izay ary talohan’izay izay tsy mbola nitranga. Hoy aho: izay nofidiko dia ho tanteraka, ary izay rehetra nofidiko dia hataoko. Antsoiko ny voromahery avy any atsinanana, dia avy any an-tany lavitra izay lehilahy hankatò ny torohevitro. Araka ny nolazaiko, dia havelako ho tonga izany; izay nokasaiko dia ataoko koa”.
Ao amin'ity fizarana ity dia milaza Andriamanitra fa afaka milaza amintsika ny fomba hiafaran'ny zava-drehetra izy, na dia manomboka aza izany. Tsy sarotra ny milaza ny hiafarany hatramin'ny voalohany rehefa nitranga ny zava-drehetra, saingy Andriamanitra ihany no afaka manambara ny farany hatramin'ny voalohany. Na dia tamin'ny andro taloha dia afaka nahafantatra mialoha ny zavatra hitranga amin'ny ho avy.
Ny olona sasany dia milaza fa afaka manao izany Andriamanitra satria mahita ny ho avy. Marina fa afaka mahita ny ho avy Andriamanitra, nefa tsy izany no tanjon'i Isaia. Ny tena hamafosiny dia tsy mba hitan'Andriamanitra na ekena mialoha fa Andriamanitra dia hiditra an-tsehatra amin'ny tantara mba hiantohany azy. Hanatanteraka izany izy, na dia amin'io tranga io aza dia mety hiantso lehilahy teratany Atsinanana hanao ilay asa izy.
Nambaran'Andriamanitra mialoha ny drafiny mialoha, ary io fanambarana io no iantsoantsika faminaniana - zavatra izay hambara mialoha. Noho izany ny faminaniana dia ampahany amin'ny fanambaran'Andriamanitra ny sitrapony sy ny tanjony. Avy eo, satria sitrapon'Andriamanitra, drafitra ary faniriana izany, dia ataony antoka fa mitranga izany. Hanao izay tiany rehetra izy, na inona na inona tiany hofariany dia manana fahefana hanao izany. Manjaka amin'ny firenena rehetra izy.
Daniel 4,17-24 dia milaza amintsika zavatra mitovy. Izany dia nitranga avy hatrany taorian’ny nanambaran’i Daniela fa ho very saina mandritra ny fito taona i Nebokadnezara Mpanjaka, ary avy eo dia nanome izao antony izao izy: “Izao no hevitr’ny Avo Indrindra ny amin’ny Mpanjaka Tompoko: Aoka tsy ho ao anatin’ny antokon’olona ianao. Ary miara-mitoetra amin'ny bibi-dia ianao, dia hampihinana ahitra tahaka ny omby aman'ondry ireny, ary handry eo ambanin'ny andon'ny lanitra ianao ka ho kotsan'ny rano, ary impito vao ho fantatrao fa manana fahefana lehibe amin'ny Tompo Izy. ny fanjakan’ny olona ka omeny izay tiany” (Daniela 4,21- iray).
Izany no nomena ny faminaniana ary natao mba hahafantaran'ny olona fa Andriamanitra no Avo Indrindra amin'ny olona rehetra. Manana fahefana izy, rehefa mampiasa olona ho mpitondra, eny fa ambany indrindra amin'ny lehilahy. Andriamanitra dia afaka manome fahefana izay tiany homena satria manjaka izy. Ity dia hafatra ampitaina amintsika amin'ny alàlan'ny faminaniana ara-Baiboly. Mampiseho amintsika izany fa tsy manam-pitiavana Andriamanitra.
Ny faminaniana dia milaza amintsika fa Andriamanitra no mpitsara. Hitantsika izany amin'ny faminaniana maro ao amin'ny Testamenta Taloha, indrindra amin'ireo faminaniana momba ny fanasaziana. Manome zavatra tsy mahafinaritra Andriamanitra, satria nanao ratsy ny olona. Andriamanitra dia mpitsara izay manana fahefana hamaly sy hanasazy ary izay manana fahefana hiantoka ny fanatanterahana azy.
Notanisaintsika ny Joda 14-15 noho izany antony izany: «Efa naminany tamin'izy ireo koa Enoka, fahafito avy amin'i Adama, ka hoy izy: Indro, ny Tompo dia miaraka amin'ny olo-maheriny arivo hitsara ny rehetra sy hanasazy ny olon-drehetra fa ny zavatra rehetra nataon'ny fiovana tsinontsinona azy izay tsy nanompo an'Andriamanitra, ary ny zava-dratsy rehetra nolazain'ny mpanota ratsy fanahy. »
Hitantsika eto fa ny Testamenta Vaovao dia manonona faminaniana iray izay tsy hita ao amin’ny Testamenta Taloha. Ao amin’ny boky apokrifa io faminaniana io 1. Enoka, ary nampidirina tao amin’ny Baiboly, ary nanjary anisan’ny firaketana ara-tsindrimandry ny amin’izay nambaran’ilay faminaniana. Ahariharin’izany fa ho avy ny Tompo – mbola ho avy izany – ary Izy no Mpitsara ny olona rehetra.
Fitiavana, famindram-po ary tsy mivadika
Aiza no milaza amintsika ilay faminaniana fa Andriamanitra dia be fitiavana, mamindra fo ary tsy mivadika? Aiza izany nambara tamin'ny faminaniana? Tsy mila faminavina ny hiainana ny toetran'Andriamanitra satria tsy miova foana izany. Ny faminaniana ao amin'ny Baiboly dia manambara zavatra momba ny drafitr'Andriamanitra sy ny zavatra nataony, ary tsy azo ihodivirana ny hanambarany zavatra momba ny toetrany. Ny drafiny sy ny drafiny dia azo inoana fa hanambara amintsika fa be fitiavana izy, be famindram-po ary tsy mivadika.
Mieritreritra ny Jeremia 2 aho eto6,13: "Koa ataovy tsara ny lalanareo sy ny asanareo, ary mihainoa ny feon'i Jehovah Andriamanitrareo, dia hanenenan'i Jehovah koa ny loza izay efa nolazainy hamelezana anareo." Rehefa miova ny olona, ​​dia hilefitra Andriamanitra; tsy mikasa ny hanasazy izy; vonona ny hanao fanombohana vaovao izy. Tsy mitana lolompo izy - mangoraka sy vonona hamela heloka.
Ho ohatra ny amin’ny tsy fivadihany dia azontsika jerena ny faminaniana ao 3. Mosesy 26,44 mijery. Ity andalana ity dia fampitandremana ho an'ny Isiraely fa raha mandika ny fanekena izy ireo dia ho resy sy hobaboina. Nefa avy eo dia ampiana izao fanomezan-toky izao: “Fa na dia any amin’ny tanin’ny fahavalo aza izy ireo, dia tsy mba laviko, ary tsy maharikoriko azy aho, mba ho tapitra aminy izany”. Io faminaniana io dia manantitrantitra ny tsy fivadihan’Andriamanitra sy ny famindram-pony ary ny fitiavany, na dia tsy ampiasaina aza ireo teny voafaritra tsara ireo.
Ny Hosea 11 dia ohatra iray hafa amin'ny fitiavan'Andriamanitra mahatoky. Na dia rehefa nilazalaza azy hoe nanao ahoana ny Isiraely tsy nivadika, dia vaky ny andininy 8-9 hoe: "Tsy mitovy ny foko, ny afo rehetra dia mirehitra avokoa. Tsy te hanao na inona na inona aho mba handringanana an'i Efraima taorian'ny hatezerako. Fa Andriamanitra aho fa tsy olona ary izaho no Saint eo aminareo ary tsy te-ho mandratra. » Ity faminaniana ity dia mampiseho ny fitiavan'Andriamanitra ny olony.
Ny faminaniana ao amin'ny Testamenta Vaovao koa dia manome toky antsika fa be fitiavana, mamindra fo ary tsy mivadika Andriamanitra. Hanangana antsika amin'ny maty Izy ary hamaly soa antsika. Hiara-belona aminy isika ary hankafy ny fitiavany mandrakizay. Ny faminaniana ara-Baiboly dia manome toky antsika fa mikasa ny hanao izany Andriamanitra ary ny fahatanterahan'ny faminaniana taloha dia manome toky antsika fa manana fahefana hanao izany ary hanao araka izay nokasainy hataony.
Manosika olona hanana fiainana tia an'Andriamanitra
Farany, io fanambarana io dia milaza fa ny faminaniana ao amin'ny Baiboly dia manosika ny mpino hiaina fiainana araka an'Andriamanitra, ao amin'i Kristy Jesosy. Ahoana no hitranga? Ohatra, manosika antsika hitodika any amin'Andriamanitra izany satria mahazo toky isika fa maniry ny tsara indrindra ho antsika ary hahazo sitraka hatrany isika rehefa manaiky izay nomeny, ary handray ny ratsy isika amin'ny farany tsy
Amin'ity toe-javatra ity dia mitanisa 2. Petrus 3,12-14: “Fa ho avy toy ny mpangalatra ny andron’i Jehovah; dia hiempo amin'ny firohondrohona mafy ny lanitra; fa ny zavatra rehetra dia ho levona noho ny hafanana, ary ny tany sy ny asa eo amboniny dia hotsaraina. Raha levona izany rehetra izany ankehitriny, ahoana no hijoroanao eo amin’ny fandehanana masina sy ny toe-panahy araka an’Andriamanitra.”
Tokony hiandrandra ny andron'ny Tompo isika fa tsy matahotra azy io, ary tokony hanana fiainana araka an'Andriamanitra. Angamba hisy zavatra tsara hitranga amintsika raha manao izany, ary zavatra tsy dia ilaina loatra raha tsy izany no hatao. Ny faminaniana dia mamporisika antsika hiaina fiainana araka an'Andriamanitra satria manambara amintsika fa manome valisoa ho an'izay mitady azy amim-pahatokiana Andriamanitra.
Ao amin'ny andininy 12-15 dia vakiana isika: «... izay miandry sy miezaka ny hahatongavan'ny andron'Andriamanitra izay hiempo ny lanitra ary hiempo ny singa avy amin'ny hafanana. Izahay kosa dia miandry lanitra vaovao sy tany vaovao aorian'ny fampanantenany, izay itoeran'ny fahamarinana. Noho izany, ry malalako, eo am-piandrasana ianareo, andramo tsy ho voahozongozona ary tsy tokony hatao amin'ny fandriampahalemana eo anatrehany, ary ny faharetan'ny Tompontsika ho famonjena anao, ary koa i Paoly malalantsika, araka ny fahendrena nomena azy. nanoratra taminao. »
Io andinin-teny io dia mampiseho amintsika fa ny faminaniana ao amin'ny Baiboly dia mandrisika antsika hanao izay rehetra tokony hitondrana fitondran-tena sy fieritreretana tsara, hiaina fiainana araka an'Andriamanitra, ary hihavana amin'Andriamanitra. Ny fomba tokana hanaovana an'io, mazava ho azy dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Saingy amin'ity andinin-tsoratra manokana ity dia milaza amintsika Andriamanitra fa manam-paharetana, mahatoky ary mamindra fo izy.
Tena ilaina ny anjara asan'i Jesosy eto. Azo atao ny fihavanana amin'Andriamanitra fa Jesosy dia mipetraka eo ankavanan'ny Ray ary mijoro ho antsika mpisoronabe. Ny Lalàn'i Mosesy dia namaritra sy nanambara mialoha an'io lafiny amin'ny asa fanavotana an'i Jesosy io; aminny alalany no nampaherezantsika hiaina fiainana araka an Andriamanitra, hanao ny fiezahana rehetra, ary diovina amin ny takelaka izay ataontsika. Amin'ny alalàn'ny finoana azy no maha-mpisoronabe antsika dia afaka matoky isika fa navela ny helontsika ary azo antoka ny famonjena sy ny fiainana mandrakizay.
Nanome toky antsika ny faminaniana fa ny famindrampon'Andriamanitra sy ny fomba ahazoantsika mamonjy an'i Jesosy Kristy. Tsy ny faminaniana ihany no manosika antsika hiaina fiainana araka an'Andriamanitra. Ny valisoantsika na sazy ho avy dia tsy isika irery no antony hiainana tsara. Afaka mahita antony manosika ny fitondran-tena tsara isika taloha sy ankehitriny ary ho avy. Taloha satria tsara ho antsika Andriamanitra ary mankasitraka ny zavatra nataony sy vonona hanatanteraka izay lazainy. Ny fitiavan'Andriamanitra antsika no antony manosika antsika amin'izao fiainana izao; ny Fanahy Masina ao anatintsika dia mahatonga antsika maniry hampifaly azy amin'ny ataontsika. Ary ny ho avy manampy koa manosika ny fitondran-tenantsika - Mampitandrina antsika ny sazy Andriamanitra, angamba satria tiany izany fampitandremana izany manosika antsika hanova ny fitondrantenantsika. Mampanantena valisoa koa izy io, satria fantany fa manosika antsika koa izy ireo. Te hahazo ny valisoa omeny isika.
Ny fitondran-tena dia antony foana amin'ny faminaniana. Ny faminaniana dia tsy resaka fotsiny amin'ny faminaniana, ary koa momba ny fametrahana torolalan'Andriamanitra. Izany no antony faminaniana maro no mifanaraka amin'ny fepetra - nampitandrina ny sazy Andriamanitra ary manantena ny fibebahana mba tsy hahatongavan'ny famaizana. Tsy nomena faminaniana tsy misy dikany ny faminaniana momba ny ho avy - nanana tanjona tamin'izao fotoana izao izy ireo.
Nofintinin’i Zakaria ny hafatry ny mpaminany ho antso ho amin’ny fiovana: «Izao no lazain’i Jehovah, Tompon’ny maro: Mialà amin’ny lalanareo ratsy sy ny ratsy fanaonareo; Nefa tsy nihaino sy tsy nihaino Ahy izy, hoy Jehovah » (Zakaria 1,3-4). Milaza amintsika ny faminaniana fa Mpitsara mamindra fo Andriamanitra, ary miorina amin’izay ataon’i Jesosy ho antsika, dia ho voavonjy isika raha matoky azy.
Ny faminaniana sasany dia maharitra lavitra ary tsy miankina amin'ny hoe nanao soa na ratsy ny olona. Tsy ny faminaniana rehetra akory no natao ho an'izany. Eny tokoa, tonga amin'ny karazany maro ny faminaniana izay sarotra lazaina, afa-tsy amin'ny dikany ankapobeny, izay antony manompoan'ny faminaniana rehetra. Ny sasany dia ho an'ity tanjona ity, ny sasany dia ho amin'izany tanjona izany ary misy ny sasany izay tsy azontsika antoka hoe natao ho azy ireo.
Raha manandrana manao fanambarana momba ny zavatra tsy mitovy amin'ny faminaniana isika dia hanao fanambarana ankapobeny satria marina izany: Ny faminaniana ara-Baiboly dia iray amin'ireo fomba itenenan'Andriamanitra antsika sy ny hafatry ny faminaniana ankapobeny. mampahafantatra antsika ny zava-dehibe indrindra ataon Andriamanitra: Mitarika antsika mankany aminny famonjena aminny alalanny Jesoa Kristy. Mampitandrina antsika ny faminaniana
ny fitsarana ho avy, dia manome toky antsika amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ary noho izany dia mandrisika antsika hibebaka sy
hiditra ao amin'ny fandaharan'Andrimanitra.